२४ घण्टामा देशभर १२४६ कोरोना संक्रमित थपिए>> – Chautari Online
२४ घण्टामा देशभर १२४६ कोरोना संक्रमित थपिए>>
September 17, 2020 458
बितेको २४ घण्टामा देशभर १२४६ जना कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या ५९,५७३ पुगेकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै बितेको २४ घण्टामा १२ सय ४३ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले बिहीबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिए ।
हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या ४२ हजार ९४९ पुगेको पनि गौतमले बताए । आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १६ हजार २४१ रहेको छ । जसमा संस्थागत आइसोलेशनमा ७ जहार ९०३ र होम आइसोलेशनमा ८ हजार ३३८ जना रहेका छन् । यस्तै आज पीसीआर १० हजार ६४१ जनाको भएको छ । हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेकाे कुल संख्या ३८३ पुगेको छ ।
Prev‘चार जनाले खेतमै लडाएर लुगा खोल्न थाले, बचाउ-बचाउ भन्दै चिच्याउँदा कसैले सुनेनन्’
Nextअसोज २ गतेदेखि ३० गतेसम्म मलमास : मलमासमा के गर्ने ? के नगर्ने ?
विहान उठ्ने वित्तिकै कस्तो चिज देखियो भने शुभ र अशुभ हुन्छ :यसो भन्छ शास्त्र